Apple TV + dia misambotra ny zon'ny sarimihetsika The Macbeth Tragedy miaraka amin'i Denzel Washington | Avy amin'ny mac aho
Apple TV + dia misambotra ny zon'ny sarimihetsika The Macbeth Tragedy miaraka amin'i Denzel Washington
Apple TV + dia naka ny zon'ny manaraka Fahoriana tamin'ny Macbeth, ilay horonantsary voalohany nosoratan'i Joel Coen tsy nisy ny rahalahiny sy ilay mpiara-miombon'antoka amin'i Ethan Coen. Ilay sarimihetsika Hivoaka voalohany amin'ny sinema eran'izao tontolo izao izy io nandritra ny telovolana fahefatra 2021, alohan'ny vinavina manerantany amin'ny Apple TV +.
Araka ny Deadline, ity horonantsary ity dia heverina ho tetikasa malaza ary a mpifaninana amin'ny vanim-potoana. Izy io dia kintana Frances McDormand sy Denzel Washington, mpandresy multi-Oscar, ary Coen tenany dia manana mari-pankasitrahana efatra an'ny Academy. Miaraka amin'ny lisitra toy izany, zavatra vitsy dia vitsy no tsy mety.
I McDormand dia milalao an'i Lady Macbeth ary i Washington dia milalao an'i Lord Macbeth, ao anaty kinovan'ny lahatsoratr'i William Shakespeare. Voatifitra mainty sy fotsy ilay sarimihetsika. Nifidy ihany koa i Coen ialao ny fanaovana sary an-tsary any ivelany, aleony ilay antsoiny hoe "tsy fitoviana" amin'ny sehatry ny feo.
Ny sisa amin'ny mpilalao lehibe dia i Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling ary Brendan Gleeson. Ilay cinematographer, Bruno Delbonnel, ireo mpamorona akanjo, Mary Zophres, ary ilay mpamorona, Carter Burwell, dia olom-pantatr'i Coen taloha.
Ity fifanarahana ity dia nanjary lohateny mahaliana amin'ny vanim-potoana manaraka izay misy ny sarimihetsika CODA, notarihin'i Sian Heder, izay nandresy Loka 4 tamin'ny fetin'ny Sundance, ao anatin'izany ny loka ho an'ny mpijery sy ny lokan'ny Grand Jury.
Ho an'ny CODA, mila manampy isika Finch, starring Tom Hanks, horonantsary foronina amin'ny siansa avy any Amblin Entertainment tarihin'i Miguel Sapochnik, andrasana amin'ny premiere ao amin'ny Apple TV + ity sarimihetsika ity amin'ity taona ity
tanto CODA como el Finch ary ny loza nanjo an'i Macbeth dia filokana Apple 3 mahaliana mba ho mendrika amin'ny Academy Awards.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple TV + dia misambotra ny zon'ny sarimihetsika The Macbeth Tragedy miaraka amin'i Denzel Washington
Miseho ny isa Geekbench voalohany an'ny iMac 24-inch vaovao